▷ Phila Manje: Izipesheli ze-Cyber ​​​​Monday Zisasebenza (futhi Ziyifanele Imali Yakho) - 【Ukuqhathanisa】 2022
Phila manje: Amadili eCyber ​​​​Monday asasebenza (futhi afanele imali yakho)
Sesha ngezwi - Thola ngokushesha futhi kalula lokho ofuna ukukubuka usebenzisa ukusesha ngezwi.
2021-11-30T18: 22: 13.213Z
Kungaba uMackenzie lowo, futhi uyeza maduzane, kodwa uGareth Beavis weDeals Renegade ulapha ukuze athathe izintambo ngokushesha. Kufanele ngiphumule ngemuva kokubhala ibhizinisi cishe isonto lonke, kodwa ngizwe ezinye izinto ezimbalwa engingakwazi ukuziba ...
2021-11-30T17: 33: 18.517Z
Hhayi-ke, ngiqedile lapha. U-John ubhalisela omunye unyaka, kodwa okunikezwayo akupheli uma ngiqeda.
Kulabo kini ebenilokhu nilandela le bhulogi bukhoma kuze kube manje, nakubo bonke ebenilokhu nilandela imibiko yethu ngo-Black Friday naku-Cyber ​​​​Monday evikini eledlule, ngiyabonga. Ngicabanga kanjalo ngempela.
Ithimba le-LaComparacion lisebenze ngokuzikhandla ukuze likunikeze amadili angcono kakhulu okwenza ulwazi lwakho lokuthenga lube lula futhi lusebenze kahle ngangokunokwenzeka ngalesi sikhathi esimatasa, futhi sikwazisa kakhulu ukuthintana nathi ukuze uthole ulwazi lwakho.
Manje ngizodla isidlo sakusihlwa (ngise-UK), endaweni yokudlela yase-Thai esanda kuvulwa endaweni yangakithi, futhi ngibashiya ezandleni ezinekhono likaMackenzie.
2021-11-30T17: 25: 28.047Z
(Isikweletu sesithombe: HP)
I-Alliteration, awuyithandi? Ngikusho ngani lokhu, ngoba kwafika kimina ngenkathi ngizoqala le posi ngokuthi "ngifuna i-laptop"? Kodwa manje, kuthiwani silinde i-laptop ekhangayo?
Kunoma ikuphi, uma usemakethe yekhompuyutha ephathekayo entsha, asekhona amadili eCyber ​​​​Monday ukuze akhulise isifiso sakho sokudla.
Lesi sikrini sokuthinta, I-HP's 11-inch Chromebook yehliswe ngo-€ 250, kwehlisela inani layo ku-€ 349 nje uma kuqhathaniswa ne-Best Buy.. Ukubuyisela, uthola umshini ono-8GB we-RAM no-64GB wesitoreji, olungele umsebenzi wesikole nokusakaza ividiyo usohambeni.
2021-11-30T16: 51: 46.168Z
Ngisanda kufaka ithoni lamakhamera okuphepha ahlakaniphile endlini yami, futhi mahle ngempela. Ngimatasa ngokubheka ukusakaza bukhoma kufoni yami uma ngisohambeni.
Ukuthi ukuqapha izingxoxo zakho kanye nezinqubo zakho zangaphandle, phendula umuntu weposi osanda kufona ngingekho, noma ukuze nje uthole ukuthula kwengqondo okujwayelekile, amakhamera okuvikela ekhaya anikeza izinzuzo ezihlukahlukene.
Ungaqala uguquko lwekhamera yasekhaya ehlakaniphile namuhla, ngaphandle kwethegi yenani eliphezulu. Ikhamera ye-Blink Outdoor Wireless yehliselwe ku-€59.99, okukongela u-€40, e-Amazon njengamanje..
2021-11-30T16: 37: 16.318Z
Awunayo i-smart TV, kodwa ungathanda ukunethezeka kwezici ezihlakaniphile, njengokufinyelela okusheshayo kumasevisi okusakaza-bukhoma, ngokucindezela inkinobho?
Awu akuthina sonke? Futhi izindaba ezinhle ukuthi, akudingeki uthenge i-TV entsha ukuze wenze lelo phupho lifezeke.
Uma nje i-TV yakho yamanje inembobo ye-HDMI, uzokwazi ukusizakala ngobubanzi bamadivayisi okusakaza-bukhoma aletha i-Netflix, i-Prime Video, i-Disney +, i-Hulu, nezinye eziningi esikrinini sakho.
Futhi, ngenxa yamadili amahle we-Cyber ​​​​Monday, azokubiza ngaphansi kuka-€ 40, okungaphansi kakhulu kune-TV entsha.
2021-11-30T16: 21: 33.277Z
Ngiyawathanda amadili we-TV futhi i-Cyber ​​​​Monday ilethe iphathi yangempela yesaphulelo se-TV. Ukube ubufuna i-TV entsha, kungenzeka ukuthi usuvele usebenzise enye yezipesheli ze-Cyber ​​​​Monday TV.
Kodwa uma ungakakwenzi, ungesabi, njengoba kusekuningi okutholakalayo, okuhlanganisa a Ngaphezulu kuka-€ 300 okonga ochungechungeni lwama-intshi angu-1 lwe-LG OLED A48 e-Amazon.
Inani eliphansi kakhulu esilibonile kule modeli ethile, futhi ubuchwepheshe bokubonisa i-OLED buyinto ejabulisa ngempela amehlo akho.
2021-11-30T16: 11: 05.030Z
(Ikhredithi yesithombe: Shutterstock / Andrey_Popov)
Ungathanda ukuhlola amadili eCyber ​​​​Monday asele uwedwa? Nokho ngicasukile kancane, kodwa angikho lapha ukuze ngikutshele ukuthi uthenge kanjani, ukuze nje ngibonise okuhle kakhulu okusanikezwayo.
Abathengisi abakhulu basenenani elikhulu lamadili atholakalayo, ngakho-ke nazi izixhumanisi eziwusizo kwabanye babadlali abakhulu.
2021-11-30T15: 56: 52.741Z
Angikaze ngiye ejimini, ngakho okokusebenza kwejimu akuyona into evamise ukungidonsa amehlo. Nokho, kukhona amadili amahle, manje asengijikisa ikhanda.
Ngiyazi futhi ukuthi abaningi benu bayayithanda indawo yokuzivocavoca, noma okungenani nibekezelele ukuze nithuthuke. Ngamunye wenu uyangihlaba umxhwele.
Kufanele futhi ngibingelele kumlingani wami, owehle ngo-40kg ngendlela yakhe entsha yokuqeqeshwa. Ngakho-ke uma ufunda le-Big Ginge, uyayibulala - umzamo omuhle kakhulu.
Kodwa uzele inkontileka, futhi ngizoyigcina, nayo € 500 mega isaphulelo kumgwedli e-Best Buy. Kungani uye ejimini lapho ungakwazi ukuthatha ijimu uye nayo ekhaya?
2021-11-30T15: 40: 53.967Z
Ngidinga ukuhlanza isenzo sami. Cha, akunjalo. Ngiqonde indlu yami. Angiyena umuntu othuthukayo kakhulu uma kuziwa emsebenzini wasendlini, kodwa ukuvala isikhala esihle kuyasiza ngempela.
Sekuyiminyaka ngidonsa ipayipi elisindayo elinezintambo endlini, okwenza umsebenzi wasekhaya ube nzima nakakhulu. Nokho, njengoba ngithenge ivacuum yenduku engenazintambo, izinto ziye zaba ngcono kakhulu. Alula kakhulu, asebenza ngezinto eziningi futhi kulula ukuwakhipha.
Uma uthanda umsindo walokhu, I-Samsung Jet 60 Fit Cordless Stick Vacuum Yehla yaya ku-$179 e-Walmart, Ilondoloza u-$120.
2021-11-30T15: 18: 20.527Z
Sanibonani nonke, lo ngu-John McCann, umhleli oyinhloko womhlaba wonke we-LaComparacion. Iqembu kanye nami sisebenze ngokuzikhandla evikini elidlule ukuze sikulethele amadili angcono kakhulu e-Thanksgiving, Black Friday, Weekend, kanye ne-Cyber ​​​​Monday.
Uma bekunesipho esihle, kungcono ukholwe ukuthi sikulethela sona lapha kule sayithi enobulungiswa. Futhi nakuba sesibonile iningi lokunikezwayo lifika phakathi kukaLwesihlanu noMsombuluko, iphuzu liwukuthi zisekhona eziningi.
Ngijabule kakhulu ukukulethela amadili angcono kakhulu e-Cyber ​​​​Monday asatholakala, ngakho-ke woza, zibeke ezandleni zakho, futhi ungivumele ngiwaphule.
SiyiLaComparacion. Singabazingeli bemali.